‘डाक्टर’ जसले आफ्नै वीर्य प्रयोग गरेर दर्जन महिलालाई गर्भवती बनाए – Nepali Health
‘डाक्टर’ जसले आफ्नै वीर्य प्रयोग गरेर दर्जन महिलालाई गर्भवती बनाए
२०७५ वैशाख २ गते ८:४४ मा प्रकाशित
एजेन्सी । प्रजननसम्बन्धी एक क्यानेडेली चिकित्सकले निसन्तान दम्पतीलाई उपचार गर्ने बहानामा आफ्नै वीर्य प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ । सो आरोपमा एक दर्जन महिलाले उनीविरुद्ध मुद्दा हालेका छन् ।
अर्को एक मुद्दामा १६ जना मानिसले तिनको सन्तानको असली पिता आफूले छानेको पतिभन्दा फरक भएको पत्ता लागेको भन्दै नोरम्यानविरुद्ध उजुरी गरेका छन् ।
डिएनए टेस्ट गराउँदा सन्तानसँग आफ्ना वास्तविक बाबुसँग मेल नखाएको महिलाहरूको गुनासो थियो । त्यस्तै, ३५ अन्य महिलाले आफूले छनोट गरेको वीर्यसँग तिनको सन्तानको डिएनए मेल नखाएको भन्दै नोरम्यानविरुद्ध उजुरी गर्ने तयारी गरेका छन् । उनीहरूको जैविक पिता को हो भनेर पत्ता नलागिसकेको निवेदकका वकिलहरूले बताएका छन् ।
डा. नोरम्यानविरुद्ध १९७० को समयदेखि उजुरी परेको थियो । ओटावास्थित आफ्नो क्लिनिकमा आफ्ना बिरामीलाई गलत वीर्यबाट कृत्रिम गर्भाधारण गराएको आरोपमा डा. नोरम्यानलाई प्रतिबन्ध लागेको थियो ।
यसैबीच नोरम्यानविरुद्ध लागेका कुनै पनि आरोप अदालतबाट पुष्टि भइसकेको छैन । उनीविरुद्धका आरोपबारे अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
प्रदेश नम्बर ४ मा यसरी भयो मेरो बर्ष अभियानको शुभारम्भ